Roobab mahiigaan ah oo ka curtay degaano ka mid ah Puntland [Sawiro] Jawiga caasumada Puntland ee Garowe ayaa guud ahaan manta waxaa laga dareemayaa is bedel dhanka cimilada ah, waxana magaalada dul hoganaya hog
tmax: ≈ 32,5 °C
tmin: ≈ 25,1 °C
Roob 70 %
tmax: ≈ 31 °C
tmin: ≈ 25,2 °C
Roob 80 %
tmax: ≈ 31,4 °C
tmin: ≈ 24,8 °C
Roob 90 %
La soco saadaasha Roobka Guga 18-ka gobol ee dalka Soomaaliya
Halkan kala soco saadaasha Roobka ee todobaadkan, oo tilmaamay [more]
Burcad badeeddu ballo bay baalaha ku wadataa
Burcad-badeeddu waa dhibaato
la wada garowsaday illaa iyo xiligii ay soo kordhay falalka burcad-badeedda
taas oo keentay dhibaatooyin aan la soo koobi [more]
Maqaalkan waxa uu
falanqaynayaa qaababka lagu galikaro ama aytahay burcad-badeednimadu iyada oo
dad badan ay ka daahsoontahay. Falka burcad- [more]
Saamaynta Burcad Baddeeddu ku leedahay Waxbarashada
Maqaalkan waxa uu diiradda saarayaa saamaynta ay Burcad-baddeedu ku
leedahay waxbarashada. Waxay Burcad-badeeddu saameyn weyn ku yeelatay wa [more]
Hoddida Burcad-baddeeda Qormadan toddobaadlaha ah ee aanu ku falanqayno
dhibaatooyinka dhaqan, dhaqaale iyo siyaasaddeed
ee burcad-badeednimadu ku hayso Somalia iyo caa [more]
Burcad Baddeed Dad Dhib Isna Dhiban!!!
Wexaynu qormooyinkii hore kaga soo hadalnay dhibaatooyinka ay u gaystaan
bulshada qaybaheeda, kagana hadalnay saamaynta dhaqaale, amni, sum [more]
Bulshada Xeebaha ku Dhaqan: Waxaanu Eersanaa Waa Burcad-Badeedda Qoraalkani wuxu diiradda saarayaa isla markaasna tilmaan
ka bixinayaa dhibaatada ay ku hayso dadka ku dhaqan deegaamada xeebaha burcadda
Kaalinta Burcad-baddeedu ku leedahay Khilaafaadka Bulshada
Shacbiga Somalida intiisa badani waa reer guuraa xoolo-dhaqato ah. Dhaqaalihiisuna wuxu ku tiirsan yahay xoolo-dhaqashada iyo in yar oo beeraley a
Tubta khaldan (Burcad badeednimo)
Ma ducaa, Mise waa Habaar?
Waa qiso ku dhacday wiil la yiraahdo;Warsame, ahaana arday dhigan jiray
dugsi sare. Wuxuuna ka dhashay qoys danyar ah,oo xalaal quudato ah,waxaana u